Previous Article A Kpọkuola Ndị Igbo Ka Ha Na-Akwàdo Ọdịnala Na Omenala Ọjị
Ọ bụ n'ịgbaso nke a ka e jiri kọwaa omenala dịka oke ihe dị mkpa na ọbara na-ehù na ndụ àgbụrụ, ma kpọkuokwa ndị Igbo n'ebe dị iche-iche ka ha jigidesie asụsụ na omenala ha ike. Ya bụ òkù bụ nke a kpọrọ site n'ọnụ otu nwa amadi selitere isi n'ichekwaba omenala Igbo, ma bụrụkwa eze ọdịnala ndị obodo Akpụ dị n'okpuru ọchịchị Orumba North nke steeti Anambra, bụ Igwe Marcel Okoli na mmemme iri ji ọhụụ obodo nke ahọ 2019.
O mere ka a mara na njirimara na omenala ndị kwèsìrì ịbụ ihe ndị ji eme ngalá ma kọwapụta mkpa ọ dị na onye ọbụla bụ ezi nwa afọ Igbo ga-amalite n'oge kuzibere ụmụ ha omenala na njirimara ndị Igbo, ka ha wee malite ichekwaba na iji ya kpọrọ ihe, maka na eze okenye anaghị adachaa, puchie.
Ka ọ na-emezupụta omenala ịwa ji kpọmkwem, Igwe Okoli kèlere Chukwu Abịama maka onyinye ndụ na ahụike o nyèrè ndị obodo ahụ na ndị Igbo n'ụwa gbaa gburugburu, ha wee kọọ ma dịkwa ndụ gwute, ma kpekwazie ka ọ gaa n'ihu ime ka ogologo ndụ, ahụike, ngozị na udo tọrọ àtọ gaa n'ihu ịdịnyere obodo ahụ na ụmụafọ ya niile n'ebe dị iche-iche ha nọ.
O tòkwazịrị aka na-achị steeti Anambra, bụ gọvanọ Willie Obianọ maka ọtụtụ ihe ukwu dị iche iche ọchịchị ya meptagoro na steeti ahụ, ma rịọkwazie ka a tụọ arò mara ka a ga-esi na-emekọ mmemme ahụ ọnụ na steeti Anambra n'ihi na nke ahụ ga-enye aka n'ịkwalite njem nlegharị anya na ya bụ steeti.
Na ntụnye nke ya, ode akwụkwọ obi eze, bụ Nze Mike Udensi kọwara omenala dịka nwata tote o tokwuru, ma kwukwazie na ọkwa mba na-achị n'olu n'olu, bụzị nke mere na ndị obodo ọbụla nwere aha dị iche-iche ha na-akpọ mmemme iri ji ọhụ n'obodo ha.
N'ịdabèrè na nke ahụ, o mere ka a mara na ndị obodo Akpụ na-akpọ mmemme iri ji ọhụụ nke ha 'Otite', nke pụtara na ọ bụ oge na omenala pụrụ iche ha ji enye Chineke ekele maka ichekwaba ha ogologo oge ahọ ọrụ niile, ma dubànyekwa ha n'oge oriri ji ọhụụ ahụ, nke ọ ga-abụ ọ bụrụ na ha emeghị ya, o nweghị onye ọbụla n'obodo ahụ egwu ga-ekwe gaa n'ubi ya gwùrú ji rie, wee rukwaa mgbe eze ọdịnala obodo ahụ gọziri ma dookwa ya nsọ maka oriri, site na ya bụ mmemme Otite.
Na nkọwa nke ya, otu nwa amadi e ji okwu ya agba ìzù n'obodo ahụ, bụ Ọkammụta Andrew Osuigwe hụtara mmemme iri ji ọhụ dịka omenala na-ejikọ ndị obodo ma kọwakwa ya dịka isi sekpụ ntị n'omenala Igbo, dịka ọ bụ ihe doro anya na o sò n'otu omenala zuru Igbo ọnụ.
Dịka ọ na-akọwa ndị Igbo dịka ndị e jiri ọrụ ugbo wee mara n'oge mbụ, wee ruzie ugbu a ha màlìtèrè itinyegasị aka n'ọmarịcha ụzọ ọzọ dịgasị iche-iche e si achụta ego; Ọkammụta Osuigwe kpọrọ òkù ka e nwee mbawanye na ngalaba ọrụ ugbo, ọkachasị n'ebe ndị Igbo nọ, ma ghara ịgbakụta ya azụ ka ọ nyụọ ka ọkụ, n'ihi ọtụtụ uru dị iche-iche si na ya apụta.
Ịgba egwu ọdịnala dị iche iche nakwa igosi ihe ngosi dị iche iche e jiri mara Igbo so n'ihe pụtakarịchara ìhè na mmemme ahụ. Ihe ndi ọzọ merekwara ka mmemme ahụ zaa aha ya bụ: iwa na ikesa ji ọhụụ ahụrụ ahụ, bụ nke e jiri mmanụ akwụ na-akwo muri muri, ụkpaka, ose, na akwụkwọ ụtazị mara abụba wee chọọ mma, tinyere mmanya ngwọ jụrụ oyi na nkwu elu, e jiri gbanyere ya ụgbọ nwamkpi.